Fanararaotana vidin'entana tany Antsirabe :: Mpivarotra maro noraofin'ny mpitandro filaminana • AoRaha
Fanararaotana vidin’entana tany Antsirabe Mpivarotra maro noraofin’ny mpitandro filaminana
Nampitaraina olona maro tany Antsirabe ny fisondrotan’ny vidin’entana tampoka, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Tonga nanao fanaraha-maso teny Antsenakely sy tao amin’ny tsenan’Asabotsy ny mpitandro filaminana, rehefa nahita ny antso avo tamin’ny haino aman-jery sy tambajotran-tserasera nataon’ny mponina.
Mpivarotra maro nanararaotra nampiakatra vidin’entana no noraofina niaraka tamin’ny entana namidiny tamin’ny sarany mihoapampana.
Ireo vokatra voalaza fa fiadiana amin’ny otrik’ aretina “ covid-19”, izay mampitaintaina ny besinimaro, amin’izao fotoana izao, no voakasiky ny fiakaram-bidy. Nisondrotra avo folo heny ny vidin’ny voasary makirana. Nilaharana ny fanjifana an’io vokatra io. Nahitana fiakaram-bidy ihany koa ny tongolo gasy sy sakamalao ary ireo karazana ravin- kazo fanaovana evoka, toy ny kininim-potsy sy ravintsara.
Nisy tamin’ireo mpivarotra teny amin’ny tsenan’Asabotsy no voalaza fa nanitrika sy nitondra nody an’ireo entany, vantany vao nisy ny fisamborana nataon’ny mpitandro ny filaminana.
Efa nandray fepetra hiadiana amin’io fanararaotana ataon’ny mpivarotra sasany io ireo tompon’andraikitra any an-toerana. Hisy ny fanaraha-maso ataon-dry zareo eny an-tsena manomboka amin’izao fiandohan’ny herinandro izao.
Tamby amin’ny fampianarana – Nivoaka ny vola 50 000 ariary ho an’ny mpanabe
Fahamehana ara-pahasalamana Faritra telo ihany no didian’ ny fanjakana hihiboka
Fiatrehana « coronavirus » Namokatra fanafody azo itsaboana ireo soritr’aretina sasany ny Cnarp
Olana ara-pahasalamana Lehilahy torana tampoka teny Andravoahangy
Fisorohana aretina :: Vehivavy roa nitsoaka fitokana- monina voasambotra
Cite Canada Toamasina :: Kidoro mifono kitapo nampisahotaka ny iray tanàna
Fihanaky ny valanaretina Faritany dimy ahitana « coronavirus »
Fivoaran’ny toe-pahasalamana Mitombo ny soritr’aretin’ireo olona 11 voan’ny « coronavirus »